डिआईजी अर्याल गण्डकी प्रमुखमा १४ महिना, को हुन् नयाँ डिआईजी दिवेश लोहनी ? - Gandak News
साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका लोहनीले सफाई पाएर बढुवा भएका थिए, पत्रकारलाई 'किक'
गण्डक न्यूज द्वारा ७ असार २०७८, सोमबार २३:०५ मा प्रकाशित 0
गण्डकी प्रदेशका डिआईजी घनश्याम अर्यालसहित १६ डिआईजीको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सोमबार भएको निर्णय अनुसार गण्डकीमा दिवेश लोहनी आउने भएका छन् । लोहनी हाल प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा छन् ।
हाल गण्डकी प्रहरी प्रमुख डिआईजी अर्याल प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्यूरो सरुवा भएका छन् । गण्डकीका प्रमुखका रुपमा अर्यालले १४ महिना व्यवसायिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे । अर्याल गत वर्ष वैशाखमा डिआईजीमा बढुवा हुनासाथ गण्डकीको प्रहरी प्रमुख बनेका थिए ।
को हुन् नयाँ डिआईजी दिवेश लोहनी ?
लोहन एसएसपी हुँदा २०७५ वैशाखमा साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मुछिए । एसपी विकासराज खनालसँगै मध्य वैशाखदेखि पक्राउ परेका लोहनी २९ भदौमा साधारण तारेखमा रिहा भएका भएका थिए । २ असोज, ०७५ मा निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।
अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएपछि निलम्बन फुकुवा गर्न दुवै जनाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। प्रधान कार्यालयको कानून शाखाले आवश्यक औपचारिक कारवाही पूरा गरेर निलम्बन निर्णय गर्ने तालुकदार गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। प्रहरी नियमावलीअनुसार निलम्बन गर्नेले नै फुकुवा गर्ने नियम भएकाले गृहले दुवै जनाको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । डिएसपी प्रजित केसी पनि सुन प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणपछि पक्राउ परेका लोहनी महानगरीय अपराध महाशाखा र खनाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख थिए। २० चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले यी दुई अधिकारीसहित डिएसपी प्रजित केसीको घटनामा संलग्नता रहेको अभियोगसहित प्रतिवादी बनाएको थियो। सई बालकृष्ण सञ्जेल, पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला लगायतका दर्जन बढी प्रहरी अधिकारीहरु पक्राउ परेका थिए ।
मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको १८ फागुन ०७४ मा अपहरणपछि हत्याको अनुसन्धानमा टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ महिनामा ३८ सय किलो सुन तस्करी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
अनुसन्धानमा शाक्य हत्याको अनुसन्धानका लागि अपराध महाशाखाको टोली कार्यक्षेत्र नाघेर मोरङ गएको, प्रमाण नष्ट गरेको र मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लाई भगाउन सघाएको आरोप लागेको थियो। तत्कालीन महाशाखा प्रमुख एसएसपी लोहनीले डीएसपी केसीको नेतृत्वमा टोली मोरङ पठाएका थिए।
पक्राउ परेका एसएसपी लोहनीले वैशाख १९, ०७५ मा पत्रकारमाथि लात्ती प्रहार गरेका थिए । जिल्ला अदालत मोरङबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय लैजाँदै गर्दा पत्रकारहरुले आफ्नो फोटो खिचेको भन्दै एसएसपी लोहनी पत्रकारमाथि लात्तीले हानेका थिए । लोहनीले उज्यालोका मोरङ सहकर्मी सुमन सुस्केरा र पत्रकार ध्रुव भट्टराईमाथि फोटो खिचेको भन्दै लात्ती प्रहार गरेका हुन् ।
लोहनीले तथानाम गाली र अपशब्द प्रयोग गर्दै एसएसपी लोहनी पत्रकारमाथि जाइलागेका थिए । सुस्केराको क्यामेरामा ताक्दै उनले दुई पटकसम्म आक्रमण गरेका हुन् । दोस्रो पटकको आक्रमण प्रयासमा सुस्केरा भागेर जोगिएका थिए । त्यसपछि उनको चर्को बिरोध भएको थियो ।
यो प्रकरणबाट सफाई पाएर लोहनी डिआईजीमा बढुवा भएका हुन् । नेपाल प्रहरीमा व्यावसायीक छवी बनाउन सफल भएका एसएसपी लोहनीलाई प्रहरी संगठनमा एक निडर व्यावसायीक प्रहरी अधिकृतका रुपमा लिईन्छ ।